Jera ọma gara na pt / Expo CHINA 2017 na Beijing, China.
Jera nwere ihe ịga nke ọma a ttended na pt / Expo CHINA 2017 mere 27-30 nke nke September 2017 na Beijing, China.
Daalụ niile maka ileta anyị ụlọ ndò
Jera nwere ihe ịga nke ọma a ttended na pt / Expo CHINA 2017 mere 27-30 nke nke September 2017 na Beijing, China. Daalụ niile maka ileta anyị ụlọ ndò
Location nke ngosi center: The National mbono Center na Beijing. Booth: Ụlọ Nzukọ E5, ụlọ ntu 5618. weebụsaịtị nke ngosi.
The isiokwu nke ngosi bụ maara anyị arụpụtara ngwaahịa na anyị na-eweta
FTTH Fiber optic cable ngwa, maka ewu nke telekomunikashions netwọk na internet.
Otú ahụ anyị:
Eriri optic splice closures (FOSC)
Eriri optic nchupu igbe (FODB)
FTTH dobe waya clamps na oyiyi akwa
Preformed akara ngwaahịa na ngwa,
Igwe anaghị agba nchara gbalaga maka ogwe osisi na ngwa.
Obi dị anyị ụtọ ọhụrụ ahịa si: China, South Asia, South America na Europe. Ọtụtụ ekele maka na-abịa. Olileanya anyị nwere ike wuru ogologo oge mmekọrịta site na àjà obi ike àgwà anyị mmekọ.
Ọ bụrụ na ị ga-nwere ajụjụ ọ bụla - egbula kpọtụrụ anyị.
Post oge: Oct-18-2017